[टिस्टुङ देउराली] नेपाली सन्दर्भमा ट्रम्प जितको अर्थ
KATHMANDUTemperature 8°CAir Quality170
यसपालिको अमेरिकी चुनाव के अर्थमा अनौठो रह्यो भने सधैँ मध्यमार्गमा रहनेले चुनाव जित्ने गरी बनाइएको अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा यसपटक खुलै रूपले अति दक्षिणपन्थी समूहले बाजी मार्‍यो ।
५ मंसिर २०७३ आइतबार
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको भोलिपल्ट नतिजा आउन थालिसकेको थियो । वर्ष दिनअघिदेखि सबैले इतिहासकै अनौठो भन्ने गरेको चुनावी प्रक्रियाको अन्त्य हुँदै थियो । करिब चार दशकको राजनीतिक इतिहास भएकी हिलारी क्लिन्टनसँगै डेमोक्र्याटिक पार्टीले राजनीतिको कुनै अनुभव नबोकेका डोनाल्ड ट्रम्प (रिपब्लिकन पार्टी)सँग पराजित भएको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै थियो । त्यसै बेला जोनाथन हाइटले यस्तो ट्वीट गरे, ‘डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरू, कृपया यसको प्रतिक्रियामा पहिचानको राजनीतिलाई झन् उचाल्ने काम नगर्नु होला । धेरै समुदाय भएको लोकतन्त्रमा त्यो विष नै हो ।’ उनले यसो भन्नुको पछाडि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ लुकेको छ । र, यसबारे छलफल गरेमा नेपाली राजनीति र समाजका केही पाटाबारे सार्थक बहस गर्न पनि सहयोग हुन्छ ।
जोनाथन हाइट नाम चलेका अमेरिकी प्राध्यापक र समाजशास्त्री हुन् । समाजमा विविधताको प्रभाव के हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने प्रमुखमध्ये नै पर्छन् उनी । समाजमा कम्पनी वा त्यस्तै अरू संरचनामा धेरै मानिसको सहकार्य चाहिन्छ, जसबाट समान उद्देश्य वा दिशामा प्रगति होस् । यसका लागि धेरै जात, भाषा, पहिचानजस्ता विविधतामा के असर हुन सक्छ वा कति उपयोगी या हानिकारक हुन सक्छ ? यिनै कुरा बुझ्ने प्रयत्नमा हाइटलगायतले अध्ययन–अनुसन्धान गरेका छन् । कुनै समूहमा लागू हुने सिद्धान्त खोज्ने प्रयास गरेका छन् उनीहरूले ।
तिनका अध्ययनले के देखाएका छन् भने विविध पहिचानका मानिसलाई जोड्ने कुनै साझा भावना भएन भने तीबीच सहकार्य मुस्किल हुन्छ । यस्तो साझा पहिचानबिना एउटा समूहको सदस्यले अर्को समूहको सदस्यलाई ‘फरक’ ठान्छ । यसले परोपकार, सहकार्य र सहयोगको भावना होइन, शंका, अविश्वास, ईष्र्या र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा जन्माउँछ । त्यसैले सफल भनेर चिनिने ठूला कम्पनी या संरचनामा ‘भित्रिया’ र ‘बाहिरिया’को पहिचान विकसित गर्ने कोसिस गरिन्छ । साझा हित प्रवद्र्धन हुने कामलाई पुरस्कृत गर्ने र सबैको सहकार्यमा मात्रै सामूहिक उन्नति हुन्छ भन्ने मान्यता बसालिन्छ । समूहको सदस्यतालाई महत्त्व दिने र विशिष्ट बनाउने कोसिस गरिन्छ । नयाँ सदस्य त्यो संस्कारमा भिजेर एकाकार भएपछि मात्रै स्वीकार गरिन्छ । कसैले यो अलिखित भित्रिया–संस्कार तोडेर समूहको हित विपरीत काम गरे उसलाई सकेसम्म कडा सजाय दिएर एकता कायम गरिन्छ ।
देशको सदस्यता भनेर चिनिने नागरिकता पनि यस्तै मान्यताबाट प्रेरित छ । प्रचलित मानकका आधारमा सफल मानिएका सबै देशमा ठूला कम्पनी वा संरचनामा जस्तै साझा संस्कार र पहिचानलाई प्रधानता दिइनु संयोग मात्रै होइन । समान हितका निम्ति भएको हुँदा सबै सदस्यलाई कर तिर्न हिचकिचाहट हुँदैन । साथै, कसैले यी नियम र संस्कार नमानेको अवस्थामा सबै मिलेर उसलाई कडा सजाय दिनेमा पनि एकमत रहन्छ । हामी उस्तै मानिस हौँ भन्ने भावनाका कारण कुनै सदस्यलाई समस्या परे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हुने र त्यसका लागि सक्षम मानिसले योगदान दिनेमा पनि एकमत छ ।
सबैभन्दा सफल ठानिएका पश्चिमा जगत्का प्राय: देशमा सामुदायिक बनोटको हिसाबले धेरै कम विविधता छ । यी समाजमा आधुनिक राज्य स्थापनाको धेरै समय एकै भाषा, धर्म र समुदायका मानिसको बाहुल्य छ । अपवाद रहेका केही देशको विविधता पनि अफ्रिकी वा एसियाली देशको तुलनामा निकै कम छ । र, त्यहाँ पनि समान भावना बनाउन थुप्रै काम गरिएका छन्, जसबाट निर्मित साझा पहिचानलाई सामुदायिक पहिचानभन्दा माथि राखिएको छ । युरोपेली युनियनले अपेक्षित सफलता पाउन नसक्नुमा देशहरूबीचको यही ‘भित्रिया’ र ‘बाहिरिया’ पहिचानको बलियो जगलाई कारण मानिएको छ ।
आप्रवासीको देश भनेर चिनिएको अमेरिका त झन् ‘अमेरिकी विशिष्टता’मा आधारित राष्ट्रिय पहिचानका निम्ति प्रख्यात छ । युरोपका विविध देशबाट पुगेका मानिसले करिब २ सय ४० वर्षअघि स्थापना गरेदेखि नै युरोपेलीभन्दा ‘हामी विशिष्ट अमेरिकी’ हौँ भन्ने यही भावना त्यो देशको पहिचान बनेको छ । अहिले पनि अमेरिकी बन्ने प्राय: सबै आप्रवासी यही पहिचानमा भिजेर ‘भित्रिया’ बन्न पुग्छन् ।
पश्चिमा मात्रै होइन, विविधताका बीच पनि सफल भएका अरू महादेशका मुलुकका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । तर, अमेरिकाजस्ता पश्चिमा देशमा यी साझा भावना विकास गर्न भने थुप्रै कृत्रिम रचना र क्रूर कार्यहरू पनि भएका छन् । प्राय: पश्चिमा देशको पहिचान र राष्ट्रियतासमेत नश्लीय प्रधानता, सीमित धार्मिक पन्थ तथा सैन्य हैकममा आधारित छ । आर्थिक संकट र कठिन समयमा यो अझै पनि बेलाबेला सतहमा आउने गरेको छ । आधुनिक युगदेखि नै धर्म, जात, राष्ट्र वा वर्गका कारण पश्चिममा ठूलठूला हिंसात्मक परिघटना भएका छन् । दुई विश्वयुद्धपछिका केही दशक आर्थिक विकासले यी प्रवृत्तिलाई छायामा पारेको भए पनि नयाँ शताब्दीका बदलिँदा परिवेशसँगै कतै तिनै चरित्र फेरि सतहमा आउन थालेका त होइनन् भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक होइन ।
पुँजीवाद, कम्युनिज्म, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, स्वच्छन्दतावादजस्ता अवधारणाका रूप फरक भए पनि यी सबै मान्यताका जगमा यही विश्वदृष्टि छ । साथै, औद्योगिकीकरण र औपनिवेशीकरण पनि । त्यसैसँग जोडिएको बलजफ्ती धर्म परिवर्तन, इभान्जेलिज्म र धर्मनिरपेक्षताजस्ता अभियानका पछाडि पनि एकै सत्य र तर्कले सही ठहर्‍याएको प्रगति हेतु पछि परेका समाजलाई सुधार्ने कर्तव्य–भावको प्रेरणा छ ।
संकटमा पश्चिमा चिन्तन र हामी
विचारधाराको राजनीति सकिएपछि अघिल्लो दशकदेखि अमेरिकामा त्यहाँको वामपन्थी खेमाले पहिचानको राजनीतिलाई भोट जित्ने सजिलो बाटोका रूपमा पहिल्यायो । तटीय क्षेत्रका मानिस, आप्रवासी, अश्वेत र हिस्पानिक समुदायको भोट पाए सधैँ चुनाव जितिन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले राजनीति गर्न थाल्यो । यसको विपरीत रिपब्लिकन पार्टी भने संरक्षणवादी नीति तथा पारम्परिक मान्यताको पछि लाग्यो । यसको एउटा खेमाले असहिष्णुता, विदेशी–विरोधी र महिला तथा अश्वेतप्रति अनुदार नीति अपनाउन थाल्यो । उसले पनि पहिचानमै आधारित भित्री अमेरिकी सहरमा गरिबहरूलाई भोट बैंक बनाउने लक्ष्य लियो ।
यसपालिको अमेरिकी चुनाव के अर्थमा अनौठो रह्यो भने सधैँ मध्यमार्गमा रहनेले चुनाव जित्ने गरी बनाइएको अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा यसपटक खुलै रूपले अति दक्षिणपन्थी समूहले बाजी मार्‍यो । आर्थिक असुरक्षा र अन्य कारणले उल्लेख्य अश्वेतहरूले पनि तिनैलाई मत दिएको तथ्य बाहिर आएको छ । यसको अर्थ के हो भने पहिचानको राजनीतिमा र त्यसका विभाजनमा खेलेर भोट ल्याउने खेल आत्मघाती हुने रहेछ । साथै, आधुनिक राज्यमा चाहिने सहकार्य, सामाजिक सुरक्षा र सद्भावका निम्ति पनि यस्तो खण्डीकरण डरलाग्दो हुने रहेछ ।
अमेरिकी चुनाव परिणाम एउटा सामान्य घटना होइन । यो पश्चिमा लोकतन्त्र र विश्वदृष्टिकै निम्ति अभूतपूर्व संकट हो । यस्तै परिणाम केही समय पहिले बेलायतको ‘ब्रेक्जिट’ जनमतसंग्रहमा देखिसकिएको छ । आउँदा युरोपेली चुनावहरूमा पनि यो जारी रहने सम्भावना छ । यसका बाछिटा रुस, टर्की र भारतजस्ता देशका सत्ता परिवर्तनमा पनि देखिएको छ । यिनै शक्तिको प्रत्यक्ष सहयोगमा गएको दशकभर नै प्रवद्र्धन गरिएको जातीय घृणा र विभाजनमा आधारित आन्दोलनले नेपाललाई पनि इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा राखेको छ । यी कार्यका परिणाम कस्ता होलान् भनेर सोच्न विद्वान् भइरहनु पर्दैन ।
यसमा द्विविधा छैन कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्र हामीले पनि चाहेका आदर्श हुन् । तर, यिनलाई हाम्रा विविधता र इतिहासको हिसाबले विकास गर्न हामी आफैँले सिक्नुपर्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि हामी सबैसँग टाढिएर, पृथक र पुरातनवादी भएर बस्नुपर्छ । वास्तवमा प्रकृतिसहितको समस्त विश्वलाई एउटै समुदाय मान्ने चलन हाम्रो भूभागका निम्ति कुनै नयाँ विचार होइन र यस किसिमको सहिष्णुतावादी विश्वव्यापीकरण हाम्रा मान्यताका विपरीत पनि छैनन् । विचारको आदानप्रदान आजभन्दा सयौँ वर्षअघि पनि हुने गरेको र फरक–फरक भूभागमा मानिसले एक अर्काबाट राम्रा कुराहरू सिकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
हामीलाई चाहिने समावेशी पहिचान र राष्ट्र विकासको दिशा पहिल्याउने हामीले नै हो । विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीले केही निश्चित वादलाई नै एक मात्र सत्यका रूपमा स्थापना गरेकाले हाम्रो देशका वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गीहरू पनि तिनै समस्याले ग्रस्त छन् । वैदेशिक पैसा र प्रभावका कारण सामुदायिक विभाजन बढाउने नयाँ–नयाँ कामले टेवा पाएका छन् । खण्डित पहिचान र उप–राष्ट्रिय राष्ट्रियताले हामीलाई अघि होइन, पछि मात्रै लानेछ । पहिचानमा आधारित घृणा र नश्लको राजनीतिको परिणाम हामीले चाहँदैमा फरक र स्वस्थकर हुनेवाला छैन ।
आफ्नो समुदायमा राष्ट्र विकासका निम्ति आपसी विश्वास र सहकार्यका भावना विकसित गर्ने देशले हामीकहाँचाहिँ किन विभाजन प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ? यसमा हामीले समयमै सोच्नुपर्ने होइन र ?
अहिले विश्वमा जुन तहको राष्ट्रवादी उभार देखिएको छ, हामीले त्यस्तो राष्ट्रवादलाई कुनै हालतमा प्रश्रय दिनु हुँदैन । अबको नेपाल निर्माणको प्राथमिकता त बरू विभिन्न समुदाय, धर्म र जातका मानिसले आफ्नो विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, भाषा र इतिहास आदिको उपभोग गर्न पाउने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा हुनुपर्छ । यी सबै कुरालाई नेपाली राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउने कडीका रूपमा जोड्न हामीले सिर्जनशील र मौलिक तरिका पनि अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यो नै हाम्रो पुस्ताका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
यसकारण नेपालको राष्ट्रिय चरित्र नै बलियो किसिमको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा हुन सक्छ । सबै जना नेपाली भएको साझा पहिचान, भावना र उद्देश्यले प्रेरित हुने कसरी हो ? अहिलेको घृणा र विभाजनकारी अभियानलाई असफल बनाएर सबैमा समानता, अवसर, न्याय, विश्वास र सद्भावको भावना कसरी विकास गर्ने ? अब त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।